स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसहित मन्त्रालयका अधिकारी गत सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा । चन्द्रकला क्षेत्री/रासस
१४ चैत्र २०७६ शुक्रबार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले ११ चैतमा मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को अवस्थाबारे लाइभ भिडियोमार्फत प्रेसलाई जानकारी गराए । त्यसको अघिल्लो दिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयमा गरेको भीडभाडसहितको पत्रकार सम्मेलनको तीव्र आलोचना भएपछि उनले भिडियो लाइभ गरेका थिए । मन्त्री ढकालले फ्रान्सबाट स्वदेश फर्किएकी १९ वर्षीया छात्रामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । जब कि, गृह मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने सर्कुलर त्यसअघि नै गरिसकेको थियो । त्यसको मन्त्रीले नै उल्लंघन गरिदिए ।
मन्त्री ढकालले अब कोरोनाबारे मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै प्रेसलाई भिडियो लाइभमार्फत जानकारी गराउने बताए पनि १२ चैतमा फेरि उनै अघि सरे । त्यति मात्र होइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट ६ चैतमा नेपाल आएका व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएकामा उनले कतारबाट आएका व्यक्तिमा कारोनाको संक्रमण पुष्टि भएको गलत सूचना दिए ।
"मन्त्रीज्यूको वक्तव्यमा यूएई नै लेखेका थियौँ, तर उहाँले बोल्दा त्रुटि गर्नुभएको हो," स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालसँग भने । त्यसको केही घन्टामै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर क्षमा माग्दै संक्रमित व्यक्ति एयर अरेबियाको जी ९५३७ बाट ६ चैत राति १०ः०९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको उल्लेख गर्‍यो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ पुगेकामा १ जना घर फर्किसकेका छन् ।
हुन त मन्त्री ढकालले प्रेस ब्रिफिङ गर्नुअघि नै कारोना संक्रमितबारेको जानकारी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट बाहिरिसकेको थियो । उपचारमा संलग्‍न चिकित्सकलाई नै जानकारी नहुने तर मिडियाबारे खबर थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका चिकित्सक र कर्मचारी रुष्ट बने । उनीहरू अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीको कार्यकक्ष नै घेर्न पुगे । यो पहिलो पटकको घटना थिएन । १० चैतमा फ्रान्सबाट फर्किएकी छात्रालाई कोरोना पुष्टि भएको पनि त्यहाँका चिकित्सकहरूले बाहिरबाटै थाहा पाएका थिए ।
मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यका कर्मचारी र चिकित्सकलाई विश्वासमा लिन नसकेको प्रमाणका लागि यी प्रकरण नै काफी छन् । बरु उनी मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि हस्तक्षेप गरेरै भए पनि आफू अगाडि देखिन चाहन्छन् । फलतः कोरोना रोकथामका लागि एकद्वार प्रणालीबाट काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. राजभण्डारी समन्वय अभाव खड्किएको स्वीकार्दै भन्छन्, "१३ चैतमा बैठक बस्यो । अब टिमवर्कमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।"
'कस्तो मनोविज्ञान स्थापित भयो भने स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट - पीपीई) बिना घरमा भात पकाउन पनि खतरा हुन्छ भन्‍ने खालको..,' स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले हालै मात्र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँगको अन्तर्क्रियामा चिकित्सकलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्ति हो ।
कैलालीको घोडाघोडी अस्पतालमा बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । प्रकाश मिश्र/रासस
कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा पुगे पनि उपचारमा संलग्‍न स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने पीपीईको अभाव छ । चिकित्सकहरूले भन्‍न थालेका छन्, 'सुरक्षाबिना कसरी उपचार गर्नु ?' सरकारले पीपीई खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि अझै भित्रिएको छैन । यो अवस्थामा मन्त्री ढकालले उनीहरूको हौसला बढाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित गरिरहेका छन् ।
मन्त्री ढकालको विवादित अभिव्यक्तिपश्चात प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई थमथमाउने प्रयास गरेका छन् । उनले १३ चैतमा सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमा लेखे, 'तपाईंहरूकै सिफारिसका थप सामग्रीहरु उपलब्ध हुँदैछन्, धैर्य गरौँ । कोभिड–१९ मानवीय संकटको एकजुट भएर सामना गरौँ । सरकार तपाईँहरूसँगै छ, चिन्तित नहोऔँ ।
मन्त्री ढकाल गत फागुन अन्तिम साता ‘नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिए सबैलाई क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न सकिँदैन’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि संसदमा समेत तीव्र आलोचना भयो । जब कि, कोरोना रोकथामका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको १२ चैतको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले क्‍वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, सेल्फ र होम क्‍वारेन्टाइनको व्यवस्था कायमै छ ।
मन्त्री ढकाल उक्त समितिका सदस्य पनि हुन् । कोरोना रोकथामका लागि तालुक मन्त्रालय पनि स्वास्थ्य नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, 'उनी कसबाट बिफ्रिङ लिन्छन् ?'
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सचिव (प्रशासन र प्राविधिक) को दरबन्दी छ । तर अहिले प्रशासनतर्फ यादव कोइराला मात्र छन् । लामो समय गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको अनुभव रहेका कोइरालालाई मन्त्री ढकालले आफू कानुनबाट स्वास्थ्यमा सरुवा भएसँगै संघीय मामिलाबाट ल्याएका थिए ।
सचिव डा. पुष्पा चौधरी राजीनामा दिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनमा गएपछि प्राविधिकतर्फको सचिव पद रिक्त छ । यसअघि चिकित्सक नै स्वास्थ्य सचिव रहन्थे । तर २ वर्षअघि मात्र २ सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
सचिव कोइरालाले १३ चैतमा मिडिया ब्रिफिङमार्फत दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको छ । सरकारले ५० वा त्यसभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा 'फिभर क्लिनिक' खोल्न निर्देशन दिए पनि निश्चित अस्पतालबाहेकले सम्भावित संक्रमितलाई भर्ना लिन मानेका छैनन् । बरू आशंका लागेकालाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षालाई मजबुद बनाउँदै उक्त निर्णय कडीकडाउका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सचिव कोइरालाले भनेका थिए, 'रुघाखोकी र ज्वरो आएका सम्भावित संक्रमितलाई चेकजाँच गर्न पीपीई चाहिँदैन, मास्क, ग्लोब, चस्मा र क्याप लगाएर जाँच गर्नुपर्नेछ ।' स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठक टिप्पणी गर्छन्, "यो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो । सम्भावित संक्रमितको उपचारमा संलग्‍न स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीई अनिवार्य छ । जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्किने गरी अभिव्यक्ति दिनु विडम्बना हो ।"
अहिले कोरोनाको आशंकमा रहेकाहरूको जाँच, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, किटको पूर्ति, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने अवस्थामा मन्त्री ढकालले प्राविधिक कर्मचारीलाई साथमा लिन सकेका छैन । विशेषगरी भारतसहित बाह्‍य मुलुकबाट आएकालाई अनिवार्य रुपमा क्‍वारेन्टाइनमा राखेर नमुना जाँच गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "मन्त्रीज्यू म कानुन मन्त्रालय चलाएर आएको भनेर भन्‍नुहुन्छ, जहिल्यै कटाक्ष गरेर बोल्नुहुन्छ ।"
मन्त्री ढकालले ८ फागुनमा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका महेन्द्र श्रेष्ठलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरे । उनले पनि मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्न सकेका छैनन् । श्रेष्ठ नेकपा निकट हुन् । चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले गैरचिकित्सकलाई महानिर्देशक नियुक्तिको विरोध नै गरेको थियो । जब कि, विभाग स्थापनाकालदेखि चिकित्सकलाई नै महानिर्देशक नियुक्ति गरिँदै आएको थियो ।
यति मात्र होइन, ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. रोशन पोखरेललाई मन्त्रालयमा तानेर भूमिकाविहीन बनाए । सहायक प्रवक्ता भनिए पनि उनलाई मिडियामा बोल्न दिइएको छैन । मन्त्री ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटा लगायतको ब्रिफिङ लिन्थे । तर पछिल्लो पटक सूचना प्रवाहको विषयमा उनीहरूबीच खटपट भएको छ ।
मन्त्री ढकालले आफूसँग सल्लाह नगरी सूचना प्रवाह नगर्न डा. देवकोटालाई समेत निर्देशन दिएका छन् । देवकोटा र पोखरेल कांग्रेस निकट हुन् । मन्त्री ढकाल अभिभावकत्व निर्वाह गर्न छाडेर कर्मचारीलाई छायामा राखेरै भए पनि अग्रपंक्तिमा देखिन चाहन्छन् । ढकालले नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको साथ लिन थालेका छन् । लोहनी नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) निकट हुन् ।
मन्त्री ढकालले उपल्लो तहका कर्मचारीलाई साथ लिन नसकेका बेला १० चैतमा मात्र डा. खेम कार्की स्वास्थ्यविज्ञ सल्लाहकारमा भित्रिएका छन् । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का समुदाय चिकित्सक विभाग प्रमुख समेत रहेका डा. कार्कीलाई मन्त्री ढकालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री ढकालले हिजोआज डा. कार्कीबाटै सरसल्लाह लिने गरेका छन् ।